Tirada musharrixiinta xaafadaha ajaaniibta oo aad u hooseeysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Farsmagaalka xaafadaa Rinkeby Foto: Sofia Müller/SCANPIX
Tirada musharrixiinta xaafadaha ajaaniibta oo aad u hooseeysa
La daabacay tisdag 21 augusti 2018 kl 13.32
Keliya laba boqolkii ee musharrixiinta xil-dhibaannada baarlamanka ayaa ku dhaqan xaafadaha ey ku badan yihiin danyarta ajaaniibta, kolka loo barbar dhigo kaalinta tiro ee bulshada oo ey kaga jiraan 5%.
Laanta wararka Ekot oo taageero ka helaysa hayadda tirakoobka ee magaceeda loo soo gaabiyo SCB ayaa qariideeysay xaafadaha ey musharrixiintu ku dhaqan yihiin. Qiyaastii ku dhowaadka lixda kun ee musharrixiinta baarlamanka ee doorashada ayey in ku dhow 2% ku dhaqan yihiin xaafadaha ey ajaaniibtu ku badan yihiin, halka tiro intaa ka hooseeysa ee mid boqolkiina kaalin sare kaga jiraan liisaska doorashada ee xildhibaannada. Iyada oo xaafadahaa qaarkood lagu tilmaamo iney yihiin kuwo aad u liita.
Sidoo kale wuxuu farqi ballaaran u dhexeeyaa musharrixiinta xisbiyada. Xisbiyada Vänsterpartiet iyo Socialdemokraterna ayey ugu badan yihiin musharrixiinta ku dhaqan xaafadaha dan yarta ee ajaaniibtu ku badan tahay, halka ey ugu hooseeyaan tirada musharrixiinta ka tirsan xisbiyada Moderaterna iyo Sverigedemokraterna ee xaafadaha ajaaniibta ku dhaqan.
Hase yeeshee waxaa macne ballaaran ku fadhida goobaha ey ku dhaqan yihiin musharrixiinta xisbiyada kolka laga hadleyo nidaamka dimoqoraadiyadda ee matalaada, sida uu aaminsan yahay Peter Esaiasson ahna caalin ka howlgala jaamicadda Göteborg.
Esaiasson ayaa ula jeeda in matalaad darridda musharrixiinta ee xaafadaha ajaaniibtu ku badan yihiin sabab u noqon karto in doodaha la xiriira xaafadahaasi noqdaan kuwo aan xaqiiqda ku saleeyneyn.
–Halis waxaa jiri karta in qeeylo dhaan aan jirin la sheego haddii aan war loo hayn xaafaddaha. Sidoo kale waxaa dhici karta in aan si dhab ah loo fahmin culeeyska dhibaatooyinka xaafadaha. Waana mid cad in matalaadda siyaasadda ee xaafadahaasi kolka ey ka bataanba la heleyo xog iyo waayoaragnimo dhab ah, inkasta oo ey jiraan habab kale ee waayoaragnimadaa lagu heli karo, sida uu sheegay.